DEG DEG Madaxweynaha somaliland oo hada masuul Cusub magacaabay + magaciisa iyo xilka uu u magacaabay
Tuesday March 13, 2018 - 15:01:02 in Wararka by
Hargaysa(CYN) Madaxweynaha somaliland oo hada masuul Cusub magacaabay + magaciisa iyo xilka uu u magacaabay
Hargaysa(CYN) Madaxweynaha somaliland oo hada masuul Cusub magacaabay + magaciisa iyo xilka uu u magacaabay Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa danjire Xussen
Cali Ducaale ( Cawil ) u magacaabey la taliyaha madaxweynaha ee wada hadlada Somaliland iyo Somaliya .
In Kasta oo aanu jirin war rasmi ah oo lagu cadeeyey wareegtada magacaabista ee madaxweynaha haddana warar uu Geeska Africa helay ayaa xaqiijiyey in madaxweyne Biixi uu danjire Cawil u magacaabay in uu noqdo la talyihiisa gaarka ah ee wada hadalada Somaliland iyo Somaliya .
Khilaafkaas ayaa sababay in dawlada Somaliland ay ku dhawaaqdo in wada hadaladii bishan loo balan sanaa ee dalka Somaliya ay hakisay , muddo bil ah .
Danjire Cawil ayaa mudooyinkii u danbeeyey socdaalo la moodo in ay la xidhiidhaan wada hadalada Somaliland iyo Somaliya ku maraayey dalalka gobalka Geeska Africa gaar ahaan Jabuuti iyo Kenya .
Madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo ayaa hore Danjire Cawil ugu magacaabey in uu noqdo la talyihiisa gaarka ah ee arimaha aqoonsi raadiska .
Wareegto madaxweyne oo aan iyadana saxaafada loo gudbin ayaa iyana la sheegay in madaxweynuhu uu Marwo Ifraax Cismaan u magacaabey inay noqoto madaxa horumarinta mashaariicda gaar ahaan mashruuca Dp World